192.168.0.1 အဒ်မင်ဝင်မည် & 【 2019 】 router Setup ကိုလမ်းညွှန်
ရန် Login လုပ်နည်း 192.168.0.1? Router ၏ Password ကိုထိုအ Configuration ကို Reset လုပ်ဖို့ကဘယ်လိုတွင်အဆင့်လမ်းညွှန်ချက်အားဖြင့်တစ်ဦးကအဆင့်
၏အဒ်မင် Panel ကိုမှ Login လုပ်နည်းအပေါ်ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်အားဖြင့်ဒီအဆင့်မှာ 192.168.0.1, ကျွန်တော်တစ်ဦးချင်းစီခြေလှမ်းနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များမှာကြည့်ရပါလိမ့်မယ်.
သင်သည်ဤဖတ်နေနေတယ်ဆိုရင်သင်သည်အဘယ်သို့သိရမည် 192.168.0.1? သို့သျောလညျး, သငျသညျအကွောငျးကိုမသိကြပါလျှင်. ဒါကြောင့်တစ်ဦးအမြန်ကြည့်ကြပါစို့.
အဆိုပါ IP Address ကိုကဘာလဲ 192.168.0.1?
ဘုံ၌ရှိသကဲ့သို့, IP လိပ်စာ 192.168.0.1 D-link ကိုတူဘရော့ဘန်း router များအများစုအသုံးပြုတဲ့ default အအိုင်ပီဖြစ်ပါသည်, Netgear, routers များကိုပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စသည်တို့ကို.
ကဲ့သို့သောအချို့သောအခြားလိပ်စာများ 192.168.2.1 နှင့် 192.168.1.1 router သည်၏အခြားအမှတ်တံဆိပ်တွင်လည်းအသုံးပြုကြသည်. လည်း, သာတိကျသော IP address ကိုကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့တစ်ခုတည်း device ကိုအသုံးပြုသောနိုင်ပါသည်.
Router က settings ကိုများအတွက်, 192.168.0.1 သူတို့ရဲ့ router များ '' ကို default IP address ကိုအဖြစ်အများအပြားဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်လုပ်သူကအသုံးပြုသောဘုံ IP လိပ်စာဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်အစားထိုးရန်အတွက် control panel ကိုအသုံးပွုနိုငျ, ကဲ့သို့ 192.168.1.1.
အများအားဖြင့်, ဤ IP လိပ်စာမှ password ကို router ရဲ့ထုတ်လုပ်သူအားဖြင့် setting များပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်, ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်သူတို့ဖြစ်ကြသည်:
username (စာလုံးအကြီးအသေးဂရုစိုက်ပါ): admin ရဲ့
Password ကို: admin ရဲ့
သင်သည် router ၏ password ကိုပြောင်းလဲခဲ့ကြလျှင်သင်ပြောင်းလဲသောစကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ. အမှု၌သင်တို့စကားဝှက်ကိုမေ့လျော့ကြပြီ, ထို့နောက်သင်က default password ကိုရယူနိုင်ရန်အတွက် Router က reset နိုင်ပါတယ်အဖြစ်စိုးရိမ်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ.
ယေဘုယျအားဖြင့်, Router က settings ကို Router ကို၏ backside အပေါ်ဖျောပွထား, သော IP address ကိုလည်းပါဝင်သည်, က default ရဲ့ login အသုံးပြုသူအမည်, နှင့် Router က၏ password ကို. သူတို့ကအစတံဆိပ်များအချို့ကိုအပေါ် router ကို၏နံပါတ်စဉ်ကိုမှတ်တမ်းတင်. သငျသညျထိုအရပ်၌သူတို့ကိုရှာမနိုင်လျှင်, ထို့နောက်ရုံ router ရဲ့လက်စွဲလမ်းညွှန်မှာကြည့်ယူ.
နှစ်ခု devices တွေကိုတဦးတည်း IP ကိုသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ဘယ်မှာအများအပြားကိစ္စများတွင် (ကဲ့သို့ 192.168.0.1), ပြဿနာတစ်ခုက IP ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်ခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူထိုကဲ့သို့သော '' ကိရိယာအင်တာနက်ဘရောက်ဇာကနေတဆင့်ချိတ်ဆက်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည် 'သို့မဟုတ်' 'ကွန်ပျူတာကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ရန်ပျက်ကွက်' 'အဖြစ်အမှားမက်ဆေ့ခ်ျများကြုံတွေ့ရဖို့ရှိပါတယ်.
ကျေးဇူးပြု. Login ဖို့မအောင်မြင်ဘူး 192.168.0.1 သင့် router ၏ IP Address ကို?
သို့ login ဖို့မအောင်မြင်ဘူး 192.168.0.1 Router ကို၏စီမံအုပ်ချုပ်သူ panel ကိုမှရဲ့ login စဉ်ကြုံတွေ့တစ်ဘုံပြဿနာဖြစ်ပါသည်, အကြောင်းရင်းများစွာရှိနိုင်ပါသည်, ဖွယ်ရှိ, သင့် router ရဲ့ admin ရဲ့ IP address ကိုမဟုတျပါဘူး 192.168.0.1, စသည်တို့ကို. ဤတွင်အကြှနျုပျတို့သညျဤကိစ္စကိုဖို့ဘုံဖြေရှင်းချက်အချို့ကိုပြသ.
လှမ်း 1: ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်, ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကအင်တာနက်ကို router အားဖြင့်မျှဝေသို့မဟုတ်မပါခြင်းရှိမရှိစိစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့ပါလျှင်, ထို့နောက်သင် IP လိပ်စာကိုကြိုးစားနိုင် 192.168.0.1 ဒါကြောင့်သင့် router အားဖြင့် Pre-ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်လျှင်သေချာအောင်. ပုံမှန်အားဖြင့်အသေးစိတ် router ရဲ့လက်စွဲလမ်းညွှန်ပေါ်ရေးထားလျက်ရှိ၏.
ဒါ့အပြင်အမှု၌, သင် router ရဲ့ username နဲ့ password ကိုမသိရပါဘူး, သင်လက်စွဲပေါ်မှာစစ်ဆေးသို့မဟုတ်ရိုးရိုးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှာသူတို့ကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်. လည်း, မှာပေးထားအများစုသည် router id သည်စကားဝှက်ကို သင့် router ၏ backside. ကြင်နာစွာက default ပေးထားသော Router ကအိုင်ဒီနှင့် password များအတွက်တစ်ကြိမ်စစ်ဆေး.
သငျသညျ image ကိုအောကျတှငျစစျဆေးနိုငျ, ငါသည်သင်တို့ကိုအလွယ်တကူသင့် router admin ရဲ့နဲ့ password ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သင်မည်သို့ရှင်းပြဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယူကြပြီ.
သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့် '' admin ရဲ့ '' ရှိပါတယ်, '' ဧည့်သည် '', ဤကဲ့သို့သောအချို့သောမျိုး. အရေးကြုံလျှင်, စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲပစ်နေသည်, ထို့နောက်အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်ကို router ၏ဆိပ်ကမ်းများအနားမှာသေးငယ်တဲ့အပေါက်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် router ကို reset ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
အဖျား: ကဂရုတစိုက်ရှာဖွေသင့်အကြောင်းများအတွက်အပေါက်ကပ်ရန်သွားကြားထိုးတံကိုသုံးနိုင်သည် 10 Router ကို၏ default settings ကို reset နိုင်ရန်အတွက်စက္ကန့်.
လှမ်း 2: ping ရဲ့ IP 192.168.0.1. ပထမဦးစွာ, သင်၏ desktop ရဲ့ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာမှာ taskbar ကို click, ပြီးတော့ '' Run ကို ... '' ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, ကီးဘုတ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပဲစာနယ်ဇင်း '' ကို Windows Button လေး + R ကို ''. pop-up window ကိုမှာ, သငျသညျ '' cmd လို့ရိုက်ထည့်ရန်ရှိသည်, ထို့နောက် pop-up window ထဲမှာ '' ping ရဲ့ 192.168.0.1 '' ဝင်, ping ရဲ့အကြား space ကိုရှိရမည့်သတိရနှင့် 192.168.0.1.
ထိုအခါရလဒ်အတွက်စောင့်ဆိုင်း, ပြတင်းပေါက်ပြသလျှင်သင် 'အခြိနျကိုတောင်းဆိုခြင်း' ', ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအောင်မြင်စွာသင့် router ချိတ်ဆက်မထားပါနှင့်ကပြသမယ်ဆိုရင် '' ကနေ Reply ဆိုလိုတယ် 192.168.0.1: bytes = 32 .. '', ထိုအခါ, မတော်တပို့ခကျြမြား! အဆိုပါကွန်ယက်ကိုစနစ်တကျပြေးနေသည်.
အဘယ်အရာကိုက '' တောင်းဆိုခြင်းအချိန်ထွက် '' ကိုပြသမယ်ဆိုရင်လုပ်ဖို့?
ပထမဦးစွာ, အဆိုပါရှိမရှိစစ်ဆေး ကေဘယ်လ်လိုင်း စနစ်တကျ desktop ပေါ်မှာချိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း. ငါသည်သင်တို့ကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသောအရာအထက်ပါတွေ့မြင်နိုင်သည်သောငါ၏ router ကို၏ဓာတ်ပုံကိုယူကြပြီ.
ထိုအခါစစ်ဆေးလိုင်းများမှန်ကန်စွာ Router ကို၏ညာဘက်ဆိပ်ကမ်းများသို့ပလပ်နေကြတယ်. အဆိုပါ ''WAN'' port ကိုသင့်ရဲ့ကွန်ယက်ကိုပံ့ပိုးပေးသူမှလာသောအင်တာနက်ကေဘယ်လ်နှင့်အတူပလပ်ရပါမည်.
သင့်ကွန်ပျူတာ၏ IP address ကိုစနစ်တကျသို့မဟုတ်မပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်ရှိမရှိ Check. အဲဒီအတွက်,
ကို 'ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီးအကြှနျုပျ၏ကွန်ယက်နေရာများ'' ကိုနှိပ်ပါ ''properties ကို'',
ကို 'အပေါ်ညာဘက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါဒေသခံဧရိယာကော်နက်ရှင်'' ကိုနှိပ်ပါ ''properties ကို'',
'' အင်တာနက်ပရိုတိုကောကိုကလစ်နှိပ်ပါ(TCP / IP) ပြီးတော့ '' ကိုကလစ်နှိပ်ပါproperties ကို''.
ယင်း IP ကိုသင်ထည့်သွင်းဖြေရှင်းရန်မှန်ကန်သောသို့မဟုတ်ပဲ '' အလိုအလျှောက်အနေနဲ့ IP address ကိုရယူပါ '' ကစွန့်ခွာခြင်းရှိမရှိ Check.
လူအပေါင်းတို့သည်ခြေလှမ်းများ OK ကို configure လုပ်နေကြတယ်လျှင်သင်အောင်မြင်စွာသင့် router Ping နိုင်ပါတယ်.
ဘယ်လို Setup ကိုသင့်ရဲ့ကြိုးမဲ့ Router မှ?
ပထမဦးစွာ, သင့် browser ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဝင် http://192.168.0.1,သငျတို့သခလုတ်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေဆဲရှုပ်ထွေးကလစ်နှိပ်လျှင် www.192.168.0.1 သို့မဟုတ် 192.168.o.1 မဟုတ်ပါဘူးသေချာအောင်.
ထိုအခါပေးတဲ့ dialog box ကို pop-up ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦး username နှင့် password ဘို့သင့်ကိုတောင်းဆိုနေတာ, ကို default username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ပါ.
ထိုအခါ router ကို setting ကို panel ကိုသင့်အားပြပါလိမ့်မည်, ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုသတ်မှတ်ရန်သင့်အားဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်တဲ့ setup ကို wizard ကိုအစဉ်အမြဲရှိမယ့်.
အင်တာနက်ကို option ကို configure လုပ်ပြီးစဉ်အတွင်း, PPPoE ကို select (DSL ကို virtual dial-up), ထိုသို့သင်သည်သင်၏ကွန်ယက်ကို service provider ကဆီကရထားတဲ့အကောင့်တစ်ခု username နှင့် password ဘို့သင့်ကိုမေးပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါပုံစံများအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဒေတာ save, ထို့နောက်သင့် network ကိုချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်နေ start သင့်တယ်.
နောက်ဆုံးခြေလှမ်းအတွက်, သင်သည်သင်၏ WIFI များအတွက်ခိုင်မာသော password ကိုထူထောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်, သင်၏ကြိုးမဲ့ router ကိုအများပြည်သူအခမဲ့ WIFI ပံ့ပိုးပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေမည်ဖြစ်သော.
သုံးပြီး Router ဝိုင်ဖိုင် Password ကိုပြောင်းလဲနည်း 192.168.0.1 admin ရဲ့ Panel ကို
သင့်ရဲ့ connection ကို secure တံ့သောလူသိရှင်ကြားမလိုအပ်သော access ကိုရှောင်ရှားရန်သင့် router password ကို Secure ရန်လိုအပ်သောကြောင့်.
သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ wifi router ကိုစကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ် secure ip address ကို အသုံးပြု. 192.168.0.1 ထို့နောက်မျက်နှာပြင်ပုံအပါအဝင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေးသောခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာ.
သင့် router ၏ ip address ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ admin ရဲ့ panel ကမှပထမဦးစွာရဲ့ login 192.168.0.1
သင့်ရဲ့ admin ရဲ့ panel ကမှရဲ့ login ပြီးနောက်သင်အဲဒီနောက်ကို click admin ရဲ့ panel ကမှ redirected ပါလိမ့်မယ် ကြိုးမဲ့ option ကို.
ပေါ်မှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးနောက်လာမယ့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကြိုးမဲ့ setting ကို.
သင်သည်သင်၏ admin ရဲ့ panel ကထဲကနေကြိုးမဲ့ setting ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါလိုက်တဲ့အခါအောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းသင်က admin ရဲ့ panel ကမြင်ရပါလိမ့်မည်.
setting ဒီ admin ရဲ့ panel တွင်သင်သည်သင်၏တွေ့နိုင်ပါသည် လက်ရှိစကားဝှက်.
ပုံစံ သငျသညျစောငျ့ရှောကျပေမယ့် password ကိုရိုက်ထည့်ရှေ့၌သင်တို့င်း၏လုံခြုံစေချင်နဲ့သင်ကမှတ်မိဖို့ရှိသည်သောစကားဝှက်ကို.
အထက်မျက်နှာပြင်ပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပြီးနောက်ကယ်တင်ခလုတ်ကိုအသစ်ရဲ့ password ကိုကလစ်နှိပ်ရိုက်ထည့်ပါ. အခုတော့သင်သည်သင်၏ router ကိုစကားဝှက်ကိုအောင်မြင်စွာပြောင်းလဲပြီ.
192.168.0.1 ပုဂ္ဂလိက IP လိပ်စာများတစ်ခုဖြစ်သည်, ကွန်ယက်အပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသော router များကအသုံးပြုကြသည်.
သငျသညျအသုံးပြုတဲ့ Router ကရှိပါက 192.168.0.1 အိုင်ပီလိပ်စာနှင့်သင်သိက၎င်း၏ရဲ့ login username နှင့် password ကို, သငျသညျကို log in ရန်သင့် web browser ကို၏ URL ကိုလယ်သို့ဤ IP address ကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်, နှင့်သင့်လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်မည်သည့် router ကို setting များကိုပြောင်းလဲပစ်.
ဒီ post သည် Little ကနှုတ်ကပတ်တော်ကို :
ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူအသီးအသီးတတ်နိုင်သမျှသတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်ကိုယ့် admin ရဲ့ panel က login ဖို့ဘယ်လိုများအတွက်ရိုးရှင်းသောဖြစ်စဉ်ကိုမသိရပါဘူးသူကလူအဘို့ဤအရပ်၌ငါ့အအသိပညာဝေမျှကြပါပြီ, စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့် IP လိပ်စာကိုသုံးပြီး router ကို reset 192.168.1.1.
ဤဆောင်းပါးတွင်အပေါ်အပ်လုဒ်တင်သမျှပုံရိပ်တွေလွယ်ကူသောအသုံးပြုသူများအတွက်နားလည်ကြလိမ့်မည်ဘို့ရာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယူနေကြပါတယ်. သင်ဆဲ router ကိုရဲ့ login နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်စုံစမ်းမှုရှုပ်ထွေးသို့မဟုတ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ပြီးနောက်သင်ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့စုံစမ်းမှုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်ပေးရန်နိုင်ပါတယ်ငါသည်သင်တို့၏နေ့စဉ်မှတ်ချက်ဖို့အကြောင်းပြန်ပေးစေခြင်းငှါငါ့အကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မည်.
သင်သည်ဤသင်ခန်းစာအထောက်အကူဖြစ်စေတှေ့လြှငျစကားမစပ်ငါ့အဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့မေတ္တာပြန့်ပွားစောင့်ရှောက်မျှဝေဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ & စကားလုံး. ရှေ့ကိုတစ်ဦးကကောင်းတဲ့နေ့ဖူး !
အောက်မှာ Filed: router ဝင်မည်